Haweeney uu Seygeeda Sanka Mindi uga jaray kadib markii ay guriga ka tagay ayadoo aan ka idin qaadan. | Dusta News
Home > Editorial > Haweeney uu Seygeeda Sanka Mindi uga jaray kadib markii ay guriga ka tagay ayadoo aan ka idin qaadan.
August 5, 2020 August 5, 2020 Dusta News217Leave a Comment on Haweeney uu Seygeeda Sanka Mindi uga jaray kadib markii ay guriga ka tagay ayadoo aan ka idin qaadan.
Zarka, Waa Haweeney dhibbane u noqotay Seygeeda kadib markii uu saameyey mid kamid ah Khilaafaadka qoysaska ama reerka is qaba, gaar ahaan fasax qaadashada Haweeneyda marka ay meel aadeyso.
Afgaanistaan, Ragga waa ay ka gilgishaan marka ay baxdo (Meel Aado) Haweeneydu ama ay magaceedu u sheegto dhaqtarta ay u baahato in ay ugu tagno Dan Caafimaad, waana tan keentay in falcelinta lagu dhibaateeyo Dumarka joogto u noqoto.
Haweeneydaan oo ka sheekeesay dhibaatada gaartay ayaa sheegtay in muddo laba joogo 10-Todobaad xannuunsatay, waxa ay damacday in ay isku eegno (Fiiriso) Muraayad, waxa ay aragtay ayaa Argagax iyo naxdin ku beeray.
Dhaqtar ayaa sameeyay dadaal uu ku qurxinayo suuradda wajigeeda oo iska badalay sidii Alle u abuuray, maadaama salkeeda uu gooyay Seygeeda xili uu ka carooday markii ay guriga ka baxday iyada oo aysan ka idman (Ka fasax qaadan).
Waxa ay sharaxday nolosheeda cusub, qaliinka loo sameeyay ee Sanka Macmalka ah loogu sameeyay, waxa ay isku eegtay Muraad si ay u aragto waxa kusoo kordhay, iyada oo tiri.
“Aad ayaan u farxay markii aan arkay Sankeyga, waxaa dib usoo laabatay bilicda wajigeyga, dhaqtarka waxa uu badalay qaabkii niyad jabka ahaa, balse waxaa iga muuqdo qaliinka balaastiigga la ii geliyay” ayay tiri Zarka.
Hay’adaha u dooda Xuquuqda Aadanaha waxa ay ku doodayaan in wax laga badalo dhibaatooyinka qoysaska ee waxyeelada lagu gaarsiiyo Haweenka, inta badan Lixaadkooda ayay ku waayeen, halka qaar kale muuqaal badal uu ku dhacay.
Madaxweyne Qoor Qoor oo U Ambabaxay Dalka Turkiga
Trump oo amray baaris lagu sameeyo dhacdadii lagu dilay ninkii madowga ahaa Minneopolis
Dowladda Soomaaliya Oo Shaacisay In Uu Dhacayo Shirkii Dhuusamareeb